Kuuriyada Koofureed oo sanad u kordhisay la dagaalanka - Axadle | Wararka Africa
Guddiga Difaaca Golaha Amniga Qaranka ee Kuuriyada Koofureed ayaa maanta oo Jimco ah ogolaaday in waqti kordhin loo sameeyo askarta Xukuumadda Seoul ee la dagaalanka burcad badeeda Soomaalida & saraakiisha tababarada taageerta Imaaraatka Carabta.
Qaraar waqti kordhin ah oo loo gudbiyay Guddiga Baarlamaanka ayaa la ansixiyay, waxaana sidaas loogu waqti dheereeyay howlgalka la dagaalanka Burcad Badeeda ee ka socda Gacanta Cadmeed & marinta Hormoz.
Askarta Koofurta Kuuriya ayaa tiro ahaan gaareysa 300, waxa ay heystaan Maraakiib, Doomo & diyaarado kahortagi kara weerarada Kooxaha burcad badeeda Soomaalida oo marar kala duwan gacanta ku dhigay maraakiib u badan kuwa wada shixnado ganacsi.
150-kamid ah saraakiisha Kuuriyada Koofureed waxa ay tababar siiyaan Ciidamada Imaaraatka carabta si ay ugu aqoon kordhiyaan sida ay tebisay Warbaahinta dalkaas oo qortay sheekada ciidamadaan.
Muddo kordhinta loo sameeyay Askarta Seoul waa sanad, waxaana uu dhamaanayaa waqtigaas dhammaadka sanadka soo socda 2021-ka sida ku cad warqadda la gaarsiiyay militariga Kuuriyada Koofureed.
Cutubka Akh oo ka kooban 150-xubnood waxa ay gacan-siiyaan Ciidamada gaarka ah ee Isu tagga Imaaraatka Carabta laga soo bilaabo sanadkii 2011-kii, waxaana xoogeystay xiriirka labada Dowladood.
Wakaaladda Wararka Kuuriyada Koofureed Yonhap News Agency ayaa sheegtay in ciidamada Xukuumadda Seoul isbadal wanaagsan ka sameeyeen wax ka qabashada kahortagga weerarada Kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida.
Dowladda Japan ayaa 10-kii November 2020 muddo sanad ah u kordhisay ciidamadeeda Xeebaha Soomaaliya & biyaha caalamiga ah u jooga la dagaalanka Burcad badeeda kadib markii uu ka dhamaaday waqti sharceedka howlgalkooda.
Japan oo sanad u kordhisay Ciidameeda jooga Xeebaha Soomaaliya.
Isha: Yonhap News Agency / Axadle.